Myanmar Cars Market သို့လာရောက်သူများအတွက် Forums ထည့်သွင်းခြင်း | No.1 myanmar cars websiteNo.1 myanmar cars website
ကျွန်တော်တို့ Myanmar Cars Market မှာ လာရောက် ကြည့်ရှု့သူအပေါင်းဟာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးလို့နေပါတယ်။ site ဖွင့်ပြီးလို့ တစ်လကျော်အကြာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ဟာ တနေ့ကို လာရောက် လည်ပတ်သူ ၅၀၀၀ ခန့်မှ webpage ပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော် ကြည့်ရှု့တဲ့ လူစည်ကားတဲ့ web site ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ site က comment တွေမှာ အမေးအဖြေတွေ အတော်များများ တွေ့နေရတာကြောင့် ကား ဝယ်ချင်သူ ရောင်းချင်သူများ အဆင်ပြေပြေ ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် Forum အပိုင်းကို ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကားရောင်းချချင်သူများအတွက်လည်း ဝယ်ချင်သူများနှင့် တိုက်ရိုက် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့၊ ဝယ်သူများမှလည်း သိချင်သည်များကို သိတတ်နားလည်သူများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွက်ချက်နဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် ကားအကြောင်း သိနားလည်သူ Car Showroom မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကားဝါသနာရှင်များ အားလုံးပါဝင် ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Share this:ShareEmailTwitterLinkedInGoogle +1FacebookLike this:Like Loading...	Subscribe
50 Responses to “Myanmar Cars Market သို့လာရောက်သူများအတွက် Forums ထည့်သွင်းခြင်း”
Soe Aung Med on Facebook June 26, 2012 at 11:56 pm
Reply	Ko Gyi Tun on Facebook June 27, 2012 at 12:01 am
့hilux surf .97 model.G ဂရိတ်…နှာပေါက်ပါတာဆို ..လက်ရှိဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲ..ပြောပေးပါလား
Reply	admin June 27, 2012 at 1:20 pm
Please raise this question in our forums at http://myanmarcarsmarket.com/forum/car-discussions
Reply	Mr Valentine July 5, 2012 at 3:35 pm
ကျွန်တော့်စိတ်ထင်တော့ ၂၇၀ စွန်းစွန်းဘဲ ရှိမယ်နဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်တုန်းကတော့ တော်တော်ထိသွားတာ ၃၆၀ နဲ့
Reply	myintzinhtoon July 24, 2012 at 10:33 pm
round about 270 lakh,can contact 73045394
Reply	evergreentmh October 13, 2012 at 3:12 am
Reply	Pau Piang on Facebook June 27, 2012 at 11:25 am
you better not selling an accident car….
Reply	komoe June 27, 2012 at 11:49 am
Reply	flymoelay June 30, 2012 at 9:59 pm
Reply	myat June 27, 2012 at 4:50 pm
ကားများအား spec; စုံလင်စွာဖေါ်ပြစေလိုပါသည်။
Reply	phyu2dhpi August 28, 2012 at 10:06 am
Reply	shwedana July 3, 2012 at 6:39 pm
TOYOTA ISIS ( PLATANA ) 2007 MODEL ,1.8 cc ,SILVER
Reply	MYO CHIT July 4, 2012 at 2:15 am
I like Myanmar car market.com.
Reply	aungko July 5, 2012 at 12:48 pm
want to buy super coustom car
Reply	soekyisoe July 6, 2012 at 1:06 pm
Reply	evergreentmh October 13, 2012 at 3:14 am
Reply	myint wai July 6, 2012 at 10:33 pm
Reply	evergreentmh October 13, 2012 at 3:15 am
Reply	utheinwinn38 July 6, 2012 at 11:50 pm
mitsubishi pajero 2000-2006ကားဂျပန်မှဒါတိုက်ဝယ်ရင် မြန်မာပြည်အရောက်ဘယ်လောက်ကျနိုင်လဲ
Reply	bobomyr July 8, 2012 at 3:22 am
တင်ထားတဲ့ ကားကို မရောင်းချင်တော့ဘူး။ ဈေးကျနေလို့ချစီးလိုက်တော့မယ်။
တင်ထားတာကို ဘယ်လို ပြန်ဖျက်ရမလဲ။
မလုပ်တတ်လို့ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
Reply	admin July 8, 2012 at 3:44 pm
Log in ပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် http://myanmarcarsmarket.com/my-account ကိုသွားပါ။ မရောင်ချင်သည့် ကား၏ Edit နိုပ်ပါ။ ပြီးရင် Title နောက်တွင် ‘Sold Out’ ဟုရေးပြီး Update Post ကို နိုပ်ပါ။
Reply	mashwezinoo72 July 11, 2012 at 12:03 pm
password မရသေးပါ။ကြော်ငြာ ထည်. လိုပါသည်
Reply	admin July 11, 2012 at 12:39 pm
password ကို မေးလ်ဖြင့် ထပ်ပို့လိုက်ပါတယ်။
Reply	Kyaw Kyaw July 17, 2012 at 2:39 pm
Reply	Toe Toe July 22, 2012 at 3:28 pm
I haveacar.I want to sale.2004-11 mark x ,parlwhite,push start,jp grate 4.5 B ,3D/9—-.contect me 092020161.
Reply	Thien Than July 25, 2012 at 1:57 pm
We would like to buyanew car but the car prices are changing every last minute, howabout future plan ?
Reply	အောင်အောင် July 27, 2012 at 8:37 am
ကားတင်သွင်းခွင့်အမိန့်က ကုန်သွယ် ရေးဌာနကထုတ်ပြန်တာလား၊
နေ့ စဉ်ထုတ်ပြန်နေ တဲ့ အမိန့်တွေ သိချင်ပါ တယ်
အချိန် နဲ့တပြေးညီ သိချင်ပါတယ်
ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ရင် အရမ်းဝမ်းသာရမှာပါ
Reply	Ko Hla Myo Maung July 27, 2012 at 1:31 pm
Reply	poohstory9 July 28, 2012 at 9:23 pm
ကားတစ်စီးကို အရစ်ကျသွင်းပြီး ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဆိုတာလေး ဘယ်ကို ဆက်သွယ်ရမယ် ဆိုတာလေး ပြောပြပါလား ခင်ဗျာ။ကျနော်က ပြည်ပကနေ ၀ယ်မှာ မို့လို့ပါ
Reply	electricfire7 July 31, 2012 at 10:31 am
၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လက်ရွေးစင်အားကစားသမားတွေကိုရော ကားတင်သွင်းခွင့် မပေးသေးဘူးလား
Reply	bawesan July 31, 2012 at 10:38 am
ဘယ်တော့ ကား သိန်းနှစ်ဆယ် နဲ့ ရောင်းမှာလဲ ရောင်းရင် အကြောင်းကြားပေးပါရှင့်
Reply	majuno July 31, 2012 at 10:49 am
၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေ ကို ကားတင် သွင်းခွင့်ပေးပါ
Reply	koye August 10, 2012 at 1:45 pm
ကားတန်ချိန် တွေ ကို သတ် မှတ် တာ ကညန က ၀ိတက် ပေါက် ကို သတ်မှတ် ထားတာလား ခင်ဗျား..
ဘယ်လို သတ်မှတ် ထားတယ် သိ ချင်ပါတယ်…
Reply	Htet Aung August 21, 2012 at 1:04 am
ဆူပါ ကာစတန် အရှုတ်အရှင်း ကင်း ကားသန့် ၀ယ်လိုသည်။
09 85 10 400
Reply	mg chanthar August 22, 2012 at 11:56 am
ဂျပန်ကနေ ကားတစ်စီးလောက်တင်သွင်းချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရသလဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါ။
ဘယ်အေးဂျင့်နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရတယ်ဆိုတာလေးပြောပေးပါ။
Reply	BO SAW September 14, 2012 at 7:44 pm
သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေ မှာ အ ပြိုင်ု –ညာနေတာ ဆက်သွယ်လိုက် ပါ့ လား
Reply	BO SAW September 14, 2012 at 7:42 pm
အော်…. ကား ကား ကား ကား ကား ကား ကား ကား ကား…………
Reply	AungSawThide September 15, 2012 at 11:41 am
Reply	ိtinhtay September 25, 2012 at 8:07 am
သိလိုသောအချက်များကိုMyanmar Cars Market မှဖြေမပေးဘူးလား။မေးခွန်းများတခုမှဖြေထားတာမတွေ့ ပါ။ဖြေနိုင်၇င်ဖြေပေးပါ။မသိ၇င်နားလည်သူ
ထားပေးနိုင်၇င်ပိုကောင်းပါမည်ဒါမှ web site ဖွင့်ထားတာပိုအဓိပါယ်၇ှိမှာပါ။
Reply	win myint tun October 1, 2012 at 9:27 am
Reply	win myint tun October 1, 2012 at 9:31 am
Reply	u min thu December 24, 2012 at 5:51 am
Reply	Ko Nay Myo Hlaing September 19, 2013 at 5:11 pm
Japan Mitsubishi Pajero V46-420—-&V46-421—1995-96 Model–7C/—-9C/—Pirce
Reply	kogyi January 12, 2013 at 9:44 pm
၉၉ မတ်တူးကို သိန်း၃၀ ကနဦးပေးပြီးအရစ်ကျဝယ်ချင်ပါတယ်
Reply	phyo January 18, 2013 at 11:07 pm
sport car လေးတွေ…ဘယ်လောက် ဈေးလဲ သိချင်ပါတယ်
Reply	အိမ်သူ January 22, 2013 at 2:24 pm
ကား show ပွဲတွေကောဘယ်တော့လုပ်ဖို့ရှိလဲ ဘာကားတွေပါမလဲ ဘယ်နေရမှာလုပ်မယ် ဆိုတာသိရင်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
Reply	ayeayeoo January 26, 2013 at 2:31 pm
အခု 2013 မှာ ၀င်လာတဲ့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များကိုသိချင်ပါတယ်။
Reply	ဇင်မင်း March 16, 2013 at 1:00 pm
ကန်တာ10ပေ ဒဘယ်ဝှီးနဲ့ ဘယ်လောက်ဈေးရှိလဲဘယ်showroomတွေမှာရနိုင်လဲသိချင်ပါတယ်
Reply	ak September 16, 2013 at 10:55 am
mercedes benz glk350 ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးသိချင်ပါတယ်
Reply	ko thein November 19, 2013 at 7:07 pm
toyota ipsum 2002 ရောင်းချင်ပါတယ်